BlitzMetrics: Social Media Dashboards N'ihi na gị ika | Martech Zone
Thursday, May 30, 2013 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
BlitzMetrics na-enye dashboard na-elekọta mmadụ nke na-enyocha data gị n'ofe ọwa na ngwaahịa gị niile n'otu ebe. Enweghị mkpa ịchọ nyocha maka usoro ntanetị niile. Usoro a na-enye akuko banyere ndị ọkacha mmasị gị na ndị na-eso ụzọ gị iji nyere gị aka iwulite mmata aha, itinye aka na n'ikpeazụ - ntụgharị.
Karịsịa, BlitzMetrics na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịghọta mgbe na ihe ọdịnaya kacha dị irè ka ị nwee ike ịhazigharị ozi gị dịka ihe si eme ndị na-anụ ọkụ n'obi gị obi ụtọ.
BlitzMetrics Atụmatụ na Uru
Nyochaa ọdịnaya gafee Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tumblr
N'ịwa akụkọ ọdịnala mara mma.
Benchmark megide ndị asọmpi gị.
Sochie gị Nweta Uru Mgbasa Ozi.
Muta nke onu ogugu mmadu kacha eme ihe.
Chọpụta mgbe ọdịnaya gị na-eme kacha emetụta.
Mee ka iru gị na aka gị dịkwuo mma site na ịdebe arụmọrụ ọdịnaya.
Lelee Newsfeed gị Mkpuchi na Nzaghachi.
Nweta data gị n'ebe ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla.
Tags: arụmọrụ ọdịnayadashboardihe ngosiakwụ uru mgbasa ozinjikọ akaFacebookFansnzaghachiinstagramelekọta mmadụ dashboardsmgbasa ozi mgbasa ozitumblrTwitteryoutube
Douglas Karr Thursday, May 30, 2013 Saturday, January 14, 2017
Otu Anyị Si Eji Ngwaọrụ Social na Ebe Ọrụ
Jun 8, 2013 na 4:39 AM
Doug– wow, ekele maka nyocha!
Ana m arịọ mgbaghara na ahụghị m ya na mbụ.
Biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na enwere arịrịọ ọ bụla ị nwere maka otu anyị nwere ike isi mee dashboard ndị a ka mma!